I-Ambiance + Radiance = I-Resonance Gtk Theme | Kusuka kuLinux
Ngicabanga ukuthi ngike ngasho izikhathi ezingaphezu kwesisodwa ukuthi ngiyayithanda le ndaba IGtk de Ubuntu Yiqiniso? Okuthi, njengoba sonke sazi, kunokuhlukahluka okubili: Ambience ngemibala emnyama futhi Imisebe ngemibala elula.
Kepha kuthiwani uma ufuna ukusebenzisa Imisebe ngephaneli nazo zonke izinto zalo umbala we Ambience? Yilapho engena khona ukuzodlala indawo yakhe I-Resonance, isihloko IGtk kudalwe (noma kwalungiswa) ngu umkhulu nje nokuthi singangena kuphi Deviantart nokuthi yinhle ngempela.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » I-Ambiance + Radiance = I-Resonance Gtk Theme
Ngiyayithanda nengqikimba (kopisha ku-Mac O $ X) kepha ngiyayithanda ikakhulukazi lapho ufaka i-Gnome Look bese ubona ukuthi izingqikithi eziningi zingamakhophi we-Mac O $ X, nalokho engikuthandayo izinto ezingenasisekelo.
Ngicishe ngithande izingoma zoqobo, kepha njengoba i- «super computer» enginayo ayilayishi iGnome ...
Usikhumbulani leso sithombe, futhi yize ngikhululekile nge-gnome-Shell, sengivele ngifuna ukuthi ukhiphe iphaneli ye-gnome ekuvumela ukuthi wenze lokho obujwayele ukukwenza (nokuningi). Ngisuse iphaneli elingezansi ngafaka i-docky okuyiyona esesithombeni noma i-AWN glx-dock eyaziwa kangcono njenge-cairo dock (kuya ngokuthi umuntu ngamunye unikele ini, kwesinye isikhathi abanye basalele ngemuva.), Eyodwa ezansi ezenzweni ezithandwayo zesitayela sebha , kanti enye ngakwesobunxele igxile, enezindawo.